Kaddib isku dhacii Messi iyo Maamulka Barcelona, muxuu yahay go’aanka kabtanka Argentina uu ka qaatay mustaqbalkiisa? – Gool FM
(Barcelona) 03 Abril 2019. Waxaa dhowaanahan kacsanayd xiisad ka dhex taagnayd Lionel Messi iyo Kooxdiisa Barcelona oo ku aaddan heshiis cusbooneysiintiisa, taasoo keentay shaki badan oo hareeyay mustaqbalkiisa.
Wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa sheegaya in Messi uu baaqi ku sii ahaan doono kooxda Barca, inkastoo ay xurguf kala dhexayso maamulka naadiga reer Spain.
Horraantii toddobaadkan ayuu kabtanka Blaugrana weeraray maamulka kooxdiisa, isagoo ku eedeeyay inay ciyaartoyda cadaadis saareen kaddib markii ay aqbaleen inay jaraan 70% mushaarkooda, waxaana uu ku andacoonayaa inay sababta aqbalitaanka uga daaheen ay tahay inay ka arrinsanayeen qaababka ay kooxda dhanka dhaqaalaha kaga caawin karaan.
Inkastoo uu jiro isku dhac u dhexeeya Messi iyo madaxda Barcelona, haddana Jariiradda Mundo Deportivo ayaa warrinaysa in ku guuleystaha lixda jeer ee abaal-marinta Ballon d’Or uu qorsheynayo sii joogista garoonka Camp Nou.
Heshiiska Messi uu kula jiro Barca waxaa ku xusan inuu bilaash kaga tagi karo xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado.
Waxaa lagu madalsanaa in Messi uu go’aan ka qaato mustaqbalkiisa bishan April , sidoo kalena aabbihii uu la kulmo madaxweynaha Barca ee Josep Maria Bartomeu.
Balse wadahadalladaas dib ayay u dheceen, maadaama xilli ciyaareedka la hakiyay kaddib markii maaro loo waayay xanuunka dunida sida xawliga ah ugu fidaya ee Coronavirus.